Break စကားလုံးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ
တိုက်ရိုက်လွှင့် VOA ရေဒီယိုညပိုင်း နိုဝင်ဘာ၂၈၊၂၀၂၁
ဒီတပတ် English American Style: Idioms ကဏ္ဍမှာ ကွဲတယ်၊ ကျိုးတယ် အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ (Break) ကို အခြေခံတဲ့အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ All the breaks, Break the news, Break even နဲ့ Takeabreak တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) All the breaks
All (အားလုံး)၊ the breaks က ဒီနေရာမှာ (ကျိုးတယ်၊ ကွဲတယ်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ဘဲ (အခွင့်အလမ်းတွေ) (ကံကောင်းတာတွေ) ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အခွင့်အလမ်းကောင်း အားလုံးကို ရတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အရာရာမှာ ကံကောင်းလာတာ၊ တောက်လျှောက်အခွင့်အလမ်းတွေ ပွင့်နေတာ၊ ရှိရှိသမျှ အခွင့်အလမ်းတွေ ရနေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ All the breaks ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးကို Get ဆိုတဲ့ ကြိယာနဲ့ တွဲသုံးပြီး To get all the breaks လို့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
It's just not our day. We lost as the other team got all the breaks.
ကျနော်တို့အတွက် ဒီနေ့က တွက်ချက်မကိုက်တဲ့နေ့ပါပဲဗျာ။ တခြားအသင်းက တောက်လျှောက်ကံကောင်းနေတော့ ကျနော်တို့ ရှုံးခဲ့တယ်။
(၂) Break the news
Break (ချိုးတာ)၊ the news (သတင်း) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က သတင်းတွေကို ချိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အများအားဖြင့် မကောင်းတဲ့သတင်းပေးကို ပထမဦးဆုံး ကာယကံရှင်ကို ဦးဦးဖျားဖျား အကြောင်းကြား အသိပေးတဲ့အခါမှာ ဒီအသုံးကို ရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The manager was sorry to break the news to John that he can no longer afford to hire him.
မန်နေဂျာက ဂျွန်ကို သူ့ အနေနှင့်ဆက်ငှားဖို့ မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကို ဦးဦးဖျားဖျားကာယကံရှင်ကို အသိပေးရတာ စိတ်မကောင်းခဲ့ဘူး။
(၃) Break even
Break (ချိုးတာ)၊ even (ဆတူ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဆတူချိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ အရှုံးမပေါ်တာ၊ ဘဲစားဘဲချေ ဖြစ်တာ၊ အရင်းပြန်ရတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Our business last year was pretty tough, but this year it’s much better. Looks like we will break even.
ကျနော်တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက မနှစ်က အတော်လေး အခြေအနေ ဆိုးခဲ့တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့ အခြေအနေ ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် ကြည့်ရတာတော့ အရင်းတော့ ကျေလိမ့်မယ်။
(၄) Takeabreak
Take (ယူတာ)၊abreak (ကျိုးတာ) သို့မဟုတ် (ခေတ္တနားတာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ခေတ္တအနားယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အလုပ်လုပ်တာ၊ စာကျက်ရတာကြာလို့ ပင်ပန်းငြီးငွေ့လာလို့ရှိရင် ခေတ္တအနားယူရာမှာ ဒီအသုံးကို ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
It’s ten o’clock now. Let’s takeabreak and go forawalk.
အခု ဆယ်နာရီတောင် ထိုးပြီ။ ခဏနားပြီး လမ်းထွက်လျှောက်ရအောင်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Break စကားလုံး အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေက All the breaks, Break the news, Break even နဲ့ Takeabreak တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။